Isicelo se-Mica ku-Paint and Coating Industries | I-Lingshou
Isicelo se-Mica ku-Paint and Coating Industries
(1) Umphumela Wokuvinjwa
Kuyi-film paint, ifilak eyi-Flaky izokwakha amalungiselelo afananayo, ngaleyo ndlela ivimbele ngokuphelele ukungena kwamanzi nezinye izinto ezonakalisayo, futhi uma kusetshenziswa i-mica powder esezingeni eliphakeme (isilinganiso sobukhulu be-mica okungenani izikhathi ezingama-50, mhlawumbe izikhathi ezingama-70), lokhu uhlobo lokungena kwesikhathi luvame ukwelulwa izikhathi ezi-3. Njengoba i-mica filler ishibhile kakhulu kune-resin ekhethekile, inenani eliphakeme kakhulu kwezobuchwepheshe nakwezomnotho.
Ngamafuphi, ukusebenzisa i-mica powder esezingeni eliphakeme kuyindlela ebalulekile yokuthuthukisa ikhwalithi kanye nokusebenza kwe-anti-corrosion nokugqokwa kwodonga lwangaphandle. Ngesikhathi senqubo yokuhlanganisa, ngaphambi kokuba ifilimu lokupenda liqiniswe, ama-mica chip azolala ngaphansi kwengxabano engaphezulu abese ezakheka ngokuzenzakalelayo komunye nomunye ebusweni befilimu yokupenda. Ukuqondiswa kwalolu hlobo lwamalungiselelo ahambisana nalokhu kufana ngqo nokwenziwa kwefilimu yepeyinti yokugqwala, ngakho-ke idlala kakhulu umthelela wayo. Inkinga ukuthi uhlaka lwe-mica olungejwayelekile kumele luphelele, njengoba amabhizinisi wezimboni zakwamanye amazwe esetha indinganiso yokuthi isilinganiso sobukhulu-ubukhulu kufanele kube okungenani izikhathi ezingama-50, mhlawumbe izikhathi ezingaphezu kuka-70, ngaphandle kwalokho imiphumela ngeke ifiseleke, ngoba omncane , iyindawo enkulu evimba kahle yomgoqo ngevolumu yeyunithi yokuhlunga, ngokuphambene nalokho, uma i-chip iminyene kakhulu, khona-ke ayinakukwazi ukwakha izingqimba eziningi zomgoqo. Yingakho i-granule filler imane ingenalo lolu hlobo lomsebenzi. Futhi, ukugcotshwa kwe-cosmetical kanye ne-avulsion ku-mica chip kuzothinta kabi le ndima yesithiyo (izinto ezonakalisayo zingangena kalula). I-mica chip emincane kakhulu, inkulu indawo eyisithako ngevolumu yeyunithi lokuhlunga. Umphumela ongcono uzotholakala ngosayizi olinganiselayo (omncane kakhulu awulungile ngaso sonke isikhathi).
(2) Ukuthuthukisa Izakhiwo Ezingokomzimba Nezokulinganisa zefilimu
Kusetshenziswa i-mica powder emanzi emhlabathini kungathuthukisa uchungechunge lwezinto ezibonakalayo nezomshini wefilimu kapende. Isihluthulelo yizimpawu zokuziphatha zokwenza izihlungi, okungukuthi, ubukhulu bezilinganiso zobukhulu bokugcwalisa okubucayi kanye nobubanzi besilinganiso sobude befilrous filler. I-Granular filler isebenza njengesihlabathi namatshe kukhonkolo kakhonkolo ukukhulisa insimbi.
(3) Thuthukisa i-Anti-Wear Properties yeFilimu
Ubulukhuni be-resin ngokwayo bunqunyelwe, futhi ubukhulu bezinhlobo eziningi ze-filler aliphezulu (isib, i-talcum powder). Ngokuphambene nalokho, i-mica, enye yezakhi ze-granite, yinhle ngokuya ngobulukhuni bayo namandla. Ngakho-ke, ukungeza i-mica njenge-filler, ukusebenza kwe-anti-dress kwezingubo zokugqoka kungathuthukiswa kakhulu. Kungakho i-mica powder isetshenziswa kahle ukupenda izimoto, upende womgwaqo, imbobo yokulwa nokugqwala kanye nembobo yodonga.
I-Mica, enesilinganiso esiphakeme kakhulu sokumelana kukagesi (1012-15 ohm · cm), ngokwayo iyinto enhle kakhulu yokufakelwa futhi ingubuchwepheshe obaziwa emphakathini ukuyisebenzisa ukuthuthukisa impahla yokufakelwa yifilimu yokupenda. Okuhehayo ukuthi uma besebenza nezinto eziyinhlanganisela ze-organic silicon resin ne-organic silicon ne-boric resin, bazoguqula babe uhlobo lwento yobumba ngokuqina okuhle kwempahla nokufaka impahla yokufakelwa kanye lapho ihlangabezana nokushisa okuphezulu. Ngakho-ke, ucingo nentambo eyenziwe ngalolu hlobo lwezinto ezifakwayo zingakwazi ukugcina impahla yayo yokufaka yangempela ngisho nangemva komlilo, okubaluleke kakhulu ezimayini, imigudu, izakhiwo ezikhethekile nezindawo, njll.
(5) Ukulwa Nokuvutha
I-Mica powder iwuhlobo lwe-filler ebiza kakhulu umlilo olungagudluki futhi lungasetshenziselwa ukwenza upende olungamalangabi nelangabi lomlilo uma lusetshenziswe njenge-organic halogen flame retardant.
(6) Imisebe ye-anti-UV ne-infrared
I-Mica ihle kakhulu ekuvikeleni imisebe ye-ultraviolet nemisebe ye-infrared, njll. Ngakho-ke ukufaka i-mica powder emanzi emhlabathini kupende ongaphandle kungakhulisa kakhulu ukusebenza kwefilimu kwe-ultraviolet futhi kunciphise ukuguga kwayo. Ngokusebenza kwayo kokuvikela imisebe ye-infrared infrared, i-mica isetshenziswa ekwenzeni ukulondolozwa kokushisa kanye nezinto zokufakelwa ezishisayo (njengopende).
(7) Ukunciphisa Ukwehlukaniswa
Ukusebenza kokumiswa komhlaba omanzi komhlaba mica kuhle kakhulu. Ama-chips acinene kakhulu futhi amancanyana angamisa okwesikhashana indawo ephakathi nendawo ngaphandle kokudonswa kobukhosi. Ngakho-ke, uma usebenzisa i-mica powder njenge-filler esikhundleni salokho kuzoncipha kalula, ukuqina kwesitoreji se-coating kuzokhuphula kakhulu.
(8) Ukushisa ngemitha nokushisa okuphakeme
I-Mica inamandla amakhulu emisebe ye-infrared infrared. Isibonelo, lapho usebenza nge-iron oxide, njll., Kungadala imiphumela emihle kakhulu yemisebe. Isibonelo esijwayelekile ukusetshenziswa kwaso ekugqokeni kwe-spacecraft (ukunciphisa izinga lokushisa lohlangothi lwelanga ngamashumi ama-degree). Izinto eziningi zokupenda zokufudumeza nezinto zokushisa eziphezulu zonke zidinga ukusebenzisa upende okhethekile oqukethe i-mica powder, ngoba izembozo ezinjalo zisengasebenza ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme kakhulu, njenge-1000 ℃ noma kanjalo. Ngaleso sikhathi insimbi izovunguza ibomvu, kepha upende uqhubeke ungalimali.
(9) Umphumela we-Gloss
I-Mica inobuhle obuhle be-pelescent, ngakho-ke, uma usebenzisa imikhiqizo emikhulu nosayizi mica-sheet mica, izinto zokwakha, njengokupenda nokumboza, zingacwebezela, zicwebezele noma zibonise. Ngokuphambene nalokho, i-super-fine mica powder ingenza ukubhekisisa okuphindaphindekayo nokuhambisanayo ngaphakathi kwezinto, ngaleyo ndlela kudale umphumela wokukhohlisa.
(10) Imiphumela Yokumpompela Umsindo Nokudlidliza
I-Mica ingashintsha kakhulu uchungechunge lwezinto ezibonakalayo zezinto ezibonakalayo futhi ifane noma iguqule ukubonakala kwayo. Izinto ezifana nalezi zingakwazi ukudonsa ngempumelelo amandla we-vibration futhi zenze buthaka ukushaqeka namagagasi omsindo. Ngaphezu kwalokho, amagagasi othusayo namagagasi omsindo azokwakha ukucabanga okuphindaphindayo phakathi kwama-mica chips, futhi okuphumela ekwenzeni amandla abe buthaka. Ngakho-ke, i-mica emhlabathini emanzi nayo isetshenziselwa ukulungisa izinto zokulahla umsindo nezishukumisayo.